Wararka - Hababka daaweynta goobta ee leexashada suunka gudbinta
1. Marka loo eego cabirka baaxadda gaadiidka, waxay u qaybsan tahay: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Moodooyinka inta badan la isticmaalo sida B1400 (B waxay u taagan tahay ballac ahaan, millimitir). Waqtigan xaadirka ah, awoodda wax soo saar ee ugu weyn ee shirkaddu waa B2200mm belt belt.
2. Sida laga soo xigtay deegaanka isticmaalka kala duwan, waxaa loo qaybiyaa suunka conveyor caag caadiga ah, suunka conveyor caag-u adkaysi u leh, suunka conveyor caag qabow u adkaysta, acid iyo suunka conveyor caag adkaysi u leh, suunka conveyor caag u adkaysta moodooyinka kale. Dhumucda ugu yar ee caagga daboolka ah ee suumanka xambaara caagga caadiga ah iyo suumanka xambaara cuntada waa 3.0mm, dhumucda ugu yar ee caagga daboolka hoose ahna waa 1.5mm; suumanka xambaara kuleylka u adkaysta suumanka, suumanka qaada caaga qabow-u adkaysta, aaladda acid-ka iyo kuwa caag-caabida u adkaysta, iyo suumanka caagga u adkaysta saliidda. Dhumucda ugu yar ee xabagta waa 4.5mm, dhumucda ugu yar ee daboolka hoose waa 2.0mm. Marka loo eego xaaladaha gaarka ah ee deegaanka isticmaalka, dhumucda 1.5mm ayaa loo isticmaali karaa si loo kordhiyo nolosha adeegga caagga daboolka sare iyo hoose.
3. Marka loo eego xoogga kala-qaadashada ee suunka rarka, waxa loo qaybin karaa suunka xambaarka gudbiyaha shiraaca caadiga ah iyo suunka isweydaarsiga shiraaca ee xoogga leh. Suunka awood-u-qaadista shiraacda ee xoogga leh ayaa loo qaybiyaa suunka xambaara nylon-ka (Suunka gudbinta ee NN) iyo suunka isweydaarsiga polyesterka (EP conveyor belt).
2. Hababka daaweynta goobta ee leexashada suunka gudbiyaha
(1) Iswaafajinta qallooca gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida: Marka kala duwanaanta leexashada ee suunka xamuulka aysan weyneyn, iskeel isku duubida isjiidka ayaa lagu rakibi karaa leexinta suunka gawaarida.
(2) Adkayn iyo hagaajin weecasho ku habboon: Marka suunka rarka uu ka leexdo bidix una socdo midig, isla markaana jihada ay tahay mid aan caadi ahayn, waxaa loola jeedaa in suunka rarka uu aad u dabacsan yahay. Qalabka isku dhejinta ayaa si habboon loo hagaajin karaa si looga takhaluso leexashada.
(3) Isku hagaajinta leexashada duudduuban ee hal dhinac leh: Suunka rarka ayaa had iyo jeer u weeciya hal dhinac, dhowr rolleel oo toosan ayaa lagu rakibi karaa baaxadda si dib loogu dhigo suunka.
(4) Isku hagaaji leexashada gawaarida: suunka xambaaraha wuxuu ka socdaa rullaluistemadka, hubi inuu duubku yahay mid aan caadi ahayn ama dhaqaaqayo, u hagaaji rullaluistemka booska jiifka oo si caadi ah u wareego si looga takhaluso leexashada.
(5) Saxdo leexashada isku-darka suunka rarka; suunka rarka ayaa had iyo jeer ku socda hal jiho, oo leexashada ugu badan waxay ku jirtaa laabatada. Wadajirka suunka xambaarka iyo khadka dhexe ee suunka rarka waa la sixi karaa si looga takhaluso leexashada.
(6) Isku hagaajinta leexashada roolaha jiida ee kor loo qaaday: suunka rarka wuxuu leeyahay jihada leexashada iyo masaafada gaar ah, dhowr kooxood oo rollers ah ayaa la kicin karaa dhinaca ka soo horjeedka jihada leexashada si loo baabi'iyo leexashada.
(7) Hagaaji leexashada rullaluistemadka jiidista: jihada leexashada leexinta suunka waa hubaal, kormeerkuna wuxuu ogaanayaa in khadka dhexe ee rullaluistemadka jiidku uusan ku xirnayn khadka dhexe ee suunka xambaaraha, iyo rullaluiste jiidku lagu hagaajiyo si loo baabi'iyo leexashada.
(8) Tirtirida lifaaqyada: barta leexashada ee suunka xambaarsan walina isma bedelin. Haddii lifaaqyo laga helo roogayaasha jiidaya iyo durbaanka, weecashada waa in la tirtiraa ka dib saarista.
(9) Saxitaanka leexashada quudinta: cajaladdu kuma leexanayso culeyska fudud, mana rogrogmayo culeyska culus. Miisaanka quudinta iyo booska waa la hagaajin karaa si loo baabi'iyo leexashada.
(10) Saxitaanka leexashada qaybta: jihada leexashada leexashada suunka gudbinta, boosku waa go'an yahay, leexashaduna waa mid culus. Heerka iyo toosnaanta qaybta waxaa lagu hagaajin karaa si loo baabi'iyo leexashada.